मनोरञ्जन – Page 148 – rastriyakhabar.com
यी हुन्, यौन क्षमता बढाउने खाद्य पदार्थहरु
अहिले यौनवद्र्धक औषधिको प्रयोग बढिरहेको छ । पत्रपत्रिका र टेलिभिजनहरुमा यौनवद्र्धक औषधिको विज्ञापन पनि निकै आउन थालेका छन् । तर कतिपयले ती औषधिको सेवनबाट पैसामात्र खेर गएको तथा नकारात्मक असर पुगेको महसुस गरेका छन् । एक भारतीय स्वास्थ्य अनलाइनले यौन क्षमता अभिवृद्धिको लागि घरेलु उपाय सुझाएको छ..
रणवीरको प्रेममा दीपिका पादुकोण चुर्लुम्म
बलिउड सुन्दरी दीपिका पादुकोण अहिले अभिनेता रणवीर सिंहको प्रेममा चुर्लुम्म डुबेकी छिन्। उनले कहिल्यै यो सम्बन्धको बारेमा खुलेर केहि नबोले पनि भारतीय संचार माध्यममा दीपिका रणवीरको चर्चा भइरहेको छ। उनीहरु प्राय हरेक ठाउँमा सँगै देखिनुले पनि दुइको प्रेम सम्बन्धको चर्चा बढेको हो। केहि दिनदेखि दीपिका..
अक्षय पुग्दा ठमेल ठप्प, फ्यानलाई गरे नमस्कार
काठमाडौँ ,२३ वैशाख । आफ्नो नयाँ चलचित्रको छायांकनका लागि नेपाल आएका बलिउड नायक अक्षय कुमार आज ठमेल पुगेका छन् । ठमेलको मन्डला सडकमा उनको सिनेमाको छायांकन भएको हो । सिनेमा छायांकन हुँदा २ घन्टा ठमेल आवतजावतमा रोक लगाइएको थियो । पत्रकारदेखि सर्वसाधरणलाई ठमेल प्रवेशमा कडाई गरिएको थियो । प्रहरीले..
जिब्रोको उचित प्रयोग गरे यौन जीवन रोमाञ्चक आफ्नो सेक्स जीवन अझ बढि रोमाञ्चक होस् भन्ने चाहनुहुन्छ ?
जिब्रोको उचित प्रयोग गरे यौन जीवन रोमाञ्चक आफ्नो सेक्स जीवन अझ बढि रोमाञ्चक होस् भन्ने चाहनुहुन्छ ? आफ्नो जिब्रोको प्रयोग गर्नुहोस् । यदि सहि तरिकाले उपयोग गरियो भने शरीरको यो अंगमा धेरै क्षमता रहेको छ । जिब्रोले तपाईंको सेक्स जीवनमा नयाँ आयाम थप्न निकै मद्दत गर्छ र तपाईंलाई पहिलेको भन्दा १० गुणा..
कुन आसनले गर्दा महिलाहरुलाई यौन सन्तुष्टि प्राप्ति हुन्छ पुरा जानकारी… सेक्सको क्रममा यदि तपाइको पार्टनर उफ..आह या आउच जस्ता आवज निकाल्छ भन्दैमा तपाइले यो सोच्नु भएन कि, उनले चरम सन्तुष्टि प्राप्त गरिरहेका छन् पार्टनरले सेक्सको आनन्द लिइरहेको भनेर भ्रममा पर्नु व्यार्थ हुन्छ । किनभने यो..
उमेर ढल्के पनि करिष्माको ढल्केन रेट
मनिष दाहाल ,२२ वैशाख । “मान्छे बुढो भए पनि मन चै बुढो हुदैन” भन्ने उखान धेरैले सुनेका छौ । नेपाली समाजमा धेरै मानिस छन् जो उमेर ढल्के पनि समाजका निकै महत्वपुर्ण व्यक्ति बनेर बसेका हुन्छन् । किनकी उनीहरु सगँ धेरै ज्ञान,गुनका कुरा हुन्छन् जो उनीहरु सगँ अझै पनि ताजा बनिरहेको हुन्छन् । समाजमा त्यस्तो भए..
अभिनेत्री मिथिला शर्माले पूर्वआइजिपी बोहोरासँग बिहे गर्ने तयारीमा
अभिनेत्री मिथिला शर्मा र पूर्व आइजिपी मोतिलाल बोहोराबीच बिहे हुने भएको छ। ५० वर्षीया अभिनेत्री एवं नृत्यांगना शर्माले ७४ वर्षीय बोहोरासँग बिहे गर्न लागेकी हुन्। मिथिलाले यसै वर्षभित्र नै बिहे गर्ने बताएकी छिन् भने बोहोराले यसलाई बिहे भन्नुभन्दा पनि जीवनको उत्तरार्द्धमा साथीको खोजी गरेको बताएका..
चलचित्रमा महंगी बन्दै केकी
मनिष दाहाल, २१ वैशाख । प्राय सबैको रहरको केन्द्रविन्दु चलचित्र क्षेत्र जहाँ धेरैले आफनो सपनाका लागी मरिहत्य गरिरहेका हुन्छन् । एक त ठुलो पर्दामा देखिने भए पछि बरु पैसा नै नलिई चलचित्र खेल्ने कलाकार पनि छन् यहि सिनेनगरीमा । चलचित्र क्षेत्रमा सम्भाबना बोकेर लाग्ने धेरै कलाकार छन् अनि धेरैको सोचाई छ म..
यौनसम्बन्धलाई कसरि आनन्दित र यादगर बनाउने
शनिबार, बैशाख २०, २०७१ मा प्रकाशित
यौन एकप्रकारको प्राकृतिक प्रक्रिया हो । यौनलाई लिएर कयौं किसिमका सकारात्मक र नकारात्मक कुरा हुनु खासै नौलो कुरा होइन । केहि अपबादबाहेक सबै मानिस यौन कार्यमा सहभागी हुन्छन । कसैले बिबाहपछी सेक्स गर्छन भने कसैले बिबाहअघि नै गर्छन । हुन त हाम्रो समाज अझै पनि यौनको मामिलामा खुलेर कुरा गर्न सक्ने खालको..
यौनसुख वैवाहिक जीवनको मेरुदण्ड
यौनसुख वैवाहिक जीवनको मेरुदण्ड नै हो। यसको लागि सुमधुर यौनसम्बन्ध हुनु आवश्यक छ। यौनसम्पर्क भएपछि गर्भ रहनु स्वाभाविक हो, तर कतिपय दम्पतीलाई गर्भावस्थामा यौनसम्पर्क राख्नु हुन्छ वा हुन्न भन्ने थाहा नै हुँदैन र धेरै चिन्तामा परिरहेका हुन्छन्। महिला वा गर्भको शिशुलाई केही नकारात्मक असर पर्ला कि..
प्रत्येक दिन यौनसम्पर्क गर्दा ६ फाइदा
यौनसम्पर्क गर्दा आनन्दायी महशुस त हुन्छनै । तर शरीरको सुन्दरताको लागि पनि उपयुक्त मानिन्छ । आजको बेफुर्सदिलो समयमा यौनसम्पर्क गर्ने समय मानिसमा कमै पाइन्छ तरपनि प्रायगरी प्रत्येक दिन यौनसम्पर्क गर्नाले अनेकौं फाइदाहरु छन् जुन यसप्रकार छ । १) महत्वपूर्ण कसरत : यौनसम्पर्क सबैभन्दा महत्वपूर्ण..
यी हुन् महिलाका कामोत्तेजक अंगहरु
महिलाको तिघ्राको भित्री भाग अत्यन्त संवेदनशील हुन्छ। उक्त भागको छाला धेरै पातलो हुन्छ र त्यहाँ कैयन् उत्तेजक तत्त्व हुन्छ। त्यसैले यो भागलाई कामोत्तेजक मानिन्छ। यो भागमा स्नेहपूर्व भए, सुमसुम्याए वा चुम्बन गरे महिलाहरूमा कामोत्तेजना वृद्धि हुन्छ र उनीहरू यौनसम्पर्कका लागि बढी उत्प्रेरित हुन्छन्..
म २५ वर्षिय परदेशी युवक हुँ । हालसम्म अविवाहित छु । लगभग १६-१७ वर्षको उमेरदेखि हस्तमैथुन गर्दै आएको छु । १८ वर्षको हुँदादेखि साढे १९ वर्षसम्म करिब साढे १ वर्ष एक विवाहित युवतीसँग यौनसम्पर्क राखेको थिएँ । त्यतिबेला भने हस्तमैथुन गरिनँ । त्यस पछिका र पहिलेका सबै समयमा हस्तमैथुन गर्ने गरेको छु । यो एक-दुई..
यौन चरमसुखका लागि पार्टनरको कला…
‘सम-भोग’ भन्ने शब्दले दुवैको सक्रिय सहभागितामा कुनै चिज भोग गर्ने भन्ने कुरालाई जनाउँछ। यौनका सन्दर्भमा यसको भूमिका अहम हुन्छ। अझ चरम सुखानुभूतिका लागि त दुवै जनाको मानसिक, शारीरिक तथा भावनात्मक सक्रियता अत्यावश्यक मानिन्छ। यौनसुख प्राप्त गरेका सबैले यसको चरम सुख पनि प्राप्त गरेका हुन्छन् भन्न..